Maalinta Caalamiga ee Suuliga oo dunida laga xusay | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / Maalinta Caalamiga ee Suuliga oo dunida laga xusay
Maalinta Caalamiga ee Suuliga oo dunida laga xusay
Muqdisho – Tan iyo sanadkii 2013-ka, QM ayaa 19-ka November sanad kasta u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Suuliga si loo asteeyo baraaruga caalamiga ah ee la xiriira muhiimadda helitaan ee musqulo iyo doorkooda la xiriira nadaafadda iyo caafimaadka adduun-weynaha.
Dalka Hindiya wuxuu kamid yahay dalalka maanta oo kale loo dabaal-degayo Maalinta Caalamiga ee Suuliga ama Musqusha uu aad u quseeyo. Tan iyo muddaba, adeegsiga musqulo hagaagsan ma ahayn dhaqan dalka oo dhan laga hir-galiyay. Si arrntaas loogu baraarugsanaado ayuu Mahatma Gandhi yiri; “Nadaafaddu aadbay uga muhiimsan tahay xurriyadda.”
Afrika dad badan oo ku nool ayaa iyaguna helin suuli, waana sababta dad badan ugu saxaroodaan bannaanada taasi oo cudurro badan ka dhashaan. Soomaaliya, miyiga iyo magaalada kama sinna helidda suuli waxaana wali culeysyo badan ka taagan yihiin qeybo badan oo kamid ah miyiga fog.
Qore: Mahad Mohamed Ali
Previous: 5 halyeey oo kubadda cagta ah oo lumiyey goolkulaad koobka dunida.
Next: Paul Pogba “Waxaan doonayaa in aan dib ugu laabto Juventus”